မက်ဆီ Messi မပါတဲ့ ဘာစီလိုနာအသင်း ရလဒ်ကောင်းရယူနိုင်မလား
24 Oct 2018 . 2:09 PM
ချန်ပီယံလိဂ်(အင်္ဂါည)ပွဲတွေမှာတော့ အသင်းကြီးတွေ ရလဒ်ကောင်းရယူနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီနေ့(ဗုဒ္ဓဟူးည)မှာ ယှဉ်ပြိုင်ကစားမယ့် ချန်ပီယံလိဂ်ပွဲတွေမှာတော့ အသင်းကြီးအချင်းချင်းထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံနေတဲ့ ပွဲတွေပါဝင်နေတာကြောင့် ရင်ခုန်စရာကောင်းဦးမှာကတော့ အမှန်ပါပဲ။
PSV – စပါး ( ဗုဒ္ဓဟူးည ၁၁း၂၅ နာရီ )
ချန်ပီယံလိဂ်မှာ နောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်ချင်ရင်တော့ စပါးအနေနဲ့ ဒီပွဲကိုမဖြစ်မနေ အနိုင်ကစားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ PSV ကတော့ အိမ်ကွင်းမှာကစားရမှာဖြစ်ပေမယ့် သိပ်ပြီးထူးထူးခြားခြားလုပ်ပြမယ်လို့ မထင်မိပါဘူး။ ပွဲအဖြေကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့ကစားသမားတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ စပါးအနိုင်သေချာပါတယ်။
ဒေါ့မွန် – အက်သလက်တီကို ( ကြာသပတေး မနက် ၁း၃၀ နာရီ )
အကောင်းဆုံးပုံစံမှာရှိနေတဲ့ အသင်းနှစ်သင်းရဲ့ ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံမှုပါ။ ဒေါ့မွန်အသင်းဟာ ပြိုင်ပွဲစုံ(၁၃)ပွဲဆက် ရှုံးပွဲမရှိကစားထားသလို အက်သလက်တီကိုအသင်းဟာလည်း ပြိုင်ပွဲစုံ(၈)ပွဲဆက် ရှုံးပွဲမရှိကစားထားပါတယ်။ နှစ်သင်းလုံးဟာ နေရာအလိုက်ပြီးပြည့်စုံမှုရှိနေပြီး ဒီပွဲမှာတော့ အိမ်ရှင်ဖြစ်တဲ့ ဒေါ့မွန်အသင်းဟာ တိုက်စစ်ကို ဦးစားပေးကစားလာဖို့ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ အက်သလက်တီကိုကလည်း ခံစစ်ကစားပုံကောင်းမွန်တဲ့အသင်းဖြစ်တာကြောင့် နည်းဗျူဟာပိုင်း အားပြိုင်မှုတွေရှိလာမယ့် ပွဲကောင်းတစ်ပွဲကိုမြင်တွေ့ရဖို့ရှိပါတယ်။ သရေရလဒ်ဟာ နှစ်သင်းလုံးအတွက် မျှတပြီး ဒေါ့မွန် ( ၁ – ၁ ) အက်သလက်တီကို ရလဒ်မျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဘာစီလိုနာ – အင်တာမီလန် ( ကြာသပတေး မနက် ၁း၃၀ နာရီ )
မက်ဆီ Messi မပါတဲ့ ဘာစီလိုနာအသင်း စမ်းသပ်ခံမယ့်ပွဲပါပဲ။ ဘာစီလိုနာခံစစ်ဟာ အားနည်းချက်လေးတွေရှိတာကြောင့် အီကာဒီ Icardi ဦးဆောင်လာမယ့် အင်တာတိုက်စစ်ပိုင်းကို အခွင့်အရေးတွေပေးဖို့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘာစီလိုနာအသင်းဟာလည်း နေရာစုံကနေဂိုးတွေသွင်းယူနိုင်တာကြောင့် အပြန်အလှန်သွင်းဂိုးတွေကို မြင်တွေ့ရဖို့ရှိနိုင်ပါတယ်။ အိမ်ကွင်းဖြစ်ပေမယ့် စုစည်းမှုကောင်းတဲ့ အင်တာကို ဘာစီလိုနာအနေနဲ့ အနိုင်ရနိုင်ဖို့ ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။ နှစ်သင်းပေါင်းသွင်းဂိုးများဖို့ရှိပြီး သရေကျသွားနိုင်ပါတယ်။
လီဗာပူးလ် – ဇီဗက်ဒါ ( ကြာသပတေး မနက် ၁း၃၀ နာရီ )
PSG နဲ့ နာပိုလီတို့တွေ့ဆုံနေတာကို လီဗာပူးလ်အပြည့်အ၀ အသုံးချမယ့်ပွဲပါပဲ။ အန်ဖီးလ်မှာ ဂိုးမိုးရွာမယ့်ပွဲဖြစ်ပြီး လီဗာပူးလ် အနိမ့်ဆုံး(၃)ဂိုးပြတ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
PSG – နာပိုလီ ( ကြာသပတေး မနက် ၁း၃၀ နာရီ )
အိမ်ကွင်းဖြစ်နေတဲ့ အပြင်တိုက်စစ်ပိုင်းမှာ ကမ္ဘာ့အဆင့်ကစားသမားတွေရှိနေတာကြောင့် PSG အနိုင်ရဖို့ ရာခိုင်နှုန်းကတော့များပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နည်းပြ အန်ဆယ်လော့တီAncelotti ရဲ့ နာပိုလီအသင်းဟာလည်း အဆိပ်ရှိတဲ့အသင်းဖြစ်တာကြောင့် မထင်မှတ်ဘဲ သရေကျသွားနိုင်ပါတယ်။ ပွဲကောင်းတစ်ပွဲဖြစ်လာမှာကတော့ သေချာနေပြီး PSG ကပ်နိုင်ရုံလောက်ပဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
Photo: Goal.com , www.tottenhamhotspur.com , Evening Standard , Complete Sports Nigeria
မကျဆီ Messi မပါတဲ့ ဘာစီလိုနာအသငျး ရလဒျကောငျးရယူနိုငျမလား
ခနျြပီယံလိဂျ(အင်ျဂါည)ပှဲတှမှောတော့ အသငျးကွီးတှေ ရလဒျကောငျးရယူနိုငျခဲ့ကွပါတယျ။ ဒီနေ့(ဗုဒ်ဓဟူးည)မှာ ယှဉျပွိုငျကစားမယျ့ ခနျြပီယံလိဂျပှဲတှမှောတော့ အသငျးကွီးအခငျြးခငျြးထိပျတိုကျတှဆေုံ့နတေဲ့ ပှဲတှပေါဝငျနတောကွောငျ့ ရငျခုနျစရာကောငျးဦးမှာကတော့ အမှနျပါပဲ။
PSV – စပါး ( ဗုဒ်ဓဟူးည ၁၁း၂၅ နာရီ )
ခနျြပီယံလိဂျမှာ နောကျတဈဆငျ့ကိုတကျခငျြရငျတော့ စပါးအနနေဲ့ ဒီပှဲကိုမဖွဈမနေ အနိုငျကစားဖို့လိုအပျပါတယျ။ PSV ကတော့ အိမျကှငျးမှာကစားရမှာဖွဈပမေယျ့ သိပျပွီးထူးထူးခွားခွားလုပျပွမယျလို့ မထငျမိပါဘူး။ ပှဲအဖွကေိုပွောငျးလဲပေးနိုငျတဲ့ကစားသမားတှကေို ပိုငျဆိုငျထားတဲ့ စပါးအနိုငျသခြောပါတယျ။
ဒေါ့မှနျ – အကျသလကျတီကို ( ကွာသပတေး မနကျ ၁း၃၀ နာရီ )
အကောငျးဆုံးပုံစံမှာရှိနတေဲ့ အသငျးနှဈသငျးရဲ့ ထိပျတိုကျတှဆေုံ့မှုပါ။ ဒေါ့မှနျအသငျးဟာ ပွိုငျပှဲစုံ(၁၃)ပှဲဆကျ ရှုံးပှဲမရှိကစားထားသလို အကျသလကျတီကိုအသငျးဟာလညျး ပွိုငျပှဲစုံ(၈)ပှဲဆကျ ရှုံးပှဲမရှိကစားထားပါတယျ။ နှဈသငျးလုံးဟာ နရောအလိုကျပွီးပွညျ့စုံမှုရှိနပွေီး ဒီပှဲမှာတော့ အိမျရှငျဖွဈတဲ့ ဒေါ့မှနျအသငျးဟာ တိုကျစဈကို ဦးစားပေးကစားလာဖို့ရှိပါတယျ။ဒါပမေဲ့ အကျသလကျတီကိုကလညျး ခံစဈကစားပုံကောငျးမှနျတဲ့အသငျးဖွဈတာကွောငျ့ နညျးဗြူဟာပိုငျး အားပွိုငျမှုတှရှေိလာမယျ့ ပှဲကောငျးတဈပှဲကိုမွငျတှရေ့ဖို့ရှိပါတယျ။ သရရေလဒျဟာ နှဈသငျးလုံးအတှကျ မြှတပွီး ဒေါ့မှနျ ( ၁ – ၁ ) အကျသလကျတီကို ရလဒျမြိုးဖွဈနိုငျပါတယျ။
ဘာစီလိုနာ – အငျတာမီလနျ ( ကွာသပတေး မနကျ ၁း၃၀ နာရီ )
မကျဆီ Messi မပါတဲ့ ဘာစီလိုနာအသငျး စမျးသပျခံမယျ့ပှဲပါပဲ။ ဘာစီလိုနာခံစဈဟာ အားနညျးခကျြလေးတှရှေိတာကွောငျ့ အီကာဒီ Icardi ဦးဆောငျလာမယျ့ အငျတာတိုကျစဈပိုငျးကို အခှငျ့အရေးတှပေေးဖို့ရှိပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ဘာစီလိုနာအသငျးဟာလညျး နရောစုံကနဂေိုးတှသှေငျးယူနိုငျတာကွောငျ့ အပွနျအလှနျသှငျးဂိုးတှကေို မွငျတှရေ့ဖို့ရှိနိုငျပါတယျ။ အိမျကှငျးဖွဈပမေယျ့ စုစညျးမှုကောငျးတဲ့ အငျတာကို ဘာစီလိုနာအနနေဲ့ အနိုငျရနိုငျဖို့ ခကျခဲနိုငျပါတယျ။ နှဈသငျးပေါငျးသှငျးဂိုးမြားဖို့ရှိပွီး သရကေသြှားနိုငျပါတယျ။
လီဗာပူးလျ – ဇီဗကျဒါ ( ကွာသပတေး မနကျ ၁း၃၀ နာရီ )
PSG နဲ့ နာပိုလီတို့တှဆေုံ့နတောကို လီဗာပူးလျအပွညျ့အ၀ အသုံးခမြယျ့ပှဲပါပဲ။ အနျဖီးလျမှာ ဂိုးမိုးရှာမယျ့ပှဲဖွဈပွီး လီဗာပူးလျ အနိမျ့ဆုံး(၃)ဂိုးပွတျနိုငျပါလိမျ့မယျ။
PSG – နာပိုလီ ( ကွာသပတေး မနကျ ၁း၃၀ နာရီ )
အိမျကှငျးဖွဈနတေဲ့ အပွငျတိုကျစဈပိုငျးမှာ ကမ်ဘာ့အဆငျ့ကစားသမားတှရှေိနတောကွောငျ့ PSG အနိုငျရဖို့ ရာခိုငျနှုနျးကတော့မြားပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ နညျးပွ အနျဆယျလော့တီAncelotti ရဲ့ နာပိုလီအသငျးဟာလညျး အဆိပျရှိတဲ့အသငျးဖွဈတာကွောငျ့ မထငျမှတျဘဲ သရကေသြှားနိုငျပါတယျ။ ပှဲကောငျးတဈပှဲဖွဈလာမှာကတော့ သခြောနပွေီး PSG ကပျနိုငျရုံလောကျပဲ ဖွဈပါလိမျ့မယျ။
by Naing Linn . 20 mins ago